Arbacada 4 Diseembar 2019, kooxda heysata horyaalnimada France Paris Saint-Germain (PSG) ayaa ku dhawaaqday iskaashi cusub oo ku faafin doona muddo seddex sano ah Rwanda iyada oo aan la cayimin tirada
Posted By: Admi1waa: Diisambar 6, 2019 3: 31 No Comments
Kigali wuxuu saxeexay, 2018, heshiis la mid ah kooxda Arsenal; heshiis lagu qiyaasay $ 40 milyan. Heshiisyadaas oo lala galay naadiyada kubbadda cagta, Rwanda waxay higsaneysaa ... Akhri wax dheeraad ah
Rwanda: Henri Nyakarundi, waxay sameyneysaa makhaayadaha mobilada qoraxda oo qaadi kara taleefanka 80 waqti markiiba "Haddii aad ku sugan tahay bartamaha Kigali taleefan aan xirneyn oo ay tahay inaad sameyso wicitaan muhiim ah, dukaannada kuleylka qoraxda ee wareega ayaa halkan kuu ah"
Posted By: KongoLisolowaa: Oktoobar 18, 2019 12: 00 No Comments
Magaalada oo dhan, waxaa jira bakhaarro kuleylka qorraxda leh oo ugu yaraan ah 5 boqol si ay si buuxda ugu dallacaan taleefanka iyo 3 boqol oo loogu talagalay daqiiqadaha 10 ee Wi-Fi. Xilligan waxaa jira 25 kio ... Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: September 28, 2019 12: 45 No Comments
Waa dadaal wanaagsan oo ka socda dhinaca Rwanda si loo soo dhoweeyo qaxootiga Madowga / Afrikaanka ah ee ku sugan dhulkeeda, qaasatan qaxootiga iyo muhaajiriinta quus ka taagan ee ku nool Liby ... Akhri wax dheeraad ah
Sidee Hutu iyo Tutsi loo abuuray: xasuuqii Ruwanda ka dhacay waa qodob hoose oo taariikhda Afrika ah; masiibadaas oo dhacday inta u dhaxaysa 600 000 iyo 1 milyan oo dhintay
Posted By: KongoLisolowaa: August 5, 2019 8: 00 No Comments
Si kastaba ha noqotee, ha sharraxin habka casriga ah ee loo soo bandhigay, taas oo ah in la yiraahdo dagaal u dhexeeya laba "Qabiilooyin" anaga oo u adeegsanay si liidata u tilmaamaysa dadka ... Akhri wax dheeraad ah
Wax walba, waxaa jira bilowga, laakiin sidoo kale dhamaadka. Mobutu waxay arkeen bilawgii xukunkiisa isagoo ilaalinaya CIA-da, laakiin waxa uu ku dooday inuusan u malaynaynin inuu dhammaadkiisu dhammaaday. Dhamaan murugo ... Akhri wax dheeraad ah
Aflagaadada Kagame ee Bill Clinton: Bill Clinton waxay ka dambaysay shirqoolkii horay loo malaynayay ee xasuuqii ka dhacay Rwanda, kaliya ma uusan diidin inuu faragaliyo, wuxuu si firfircoon u doonayay inuu sameeyo.
Posted By: KongoLisolowaa: July 12, 2019 12: 12 No Comments
Maalintii uu Bill Clinton ka soo degay gegada Kigali bishii Marso 1997 si uu ula kulmo saaxiibkiis Paul Kagame, dadka Mareykanka iyo adduunka intiisa kale waxay moodayeen inuu halkaas joogo, ... Akhri wax dheeraad ah
Boqorka Koofurta Gumeysiga Africa wuxuu noqon karaa qalad
Kankanzi: Boqorka aan la aqoon ee Rwanda, waxay xukuntay Boqortooyada Rwanda "Hase ahaatee, waxaan ka hadlaa wax yar"
Feb21 06: 35